चितवनमा कोरोना संक्रमित बढ्नथालेपछि थालियो नियन्त्रण र उपचारको तयारी – Health Post Nepal
चितवनमा कोरोना संक्रमित बढ्नथालेपछि थालियो नियन्त्रण र उपचारको तयारी
२०७८ पुष २७ गते ११:३७
चितवन – चितवन जिल्लामा कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि नियन्त्रण र उपचारको तयारी थालिएको छ। प्रशासनले भेला, मेला, महोत्सव गर्न रोक लगाएको छ भने अस्पतालहरूले थप तयारी गरेका हुन्।
प्रशासनले सोमबार २५ जनाभन्दा बढी भेला भएर हुने सबै प्रकारका कार्यक्रममा रोक लगाएको छ। सवारीसाधन, सार्वजनिकस्थलमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ। अस्पतालहरूले पनि संक्रमित बढ्न सक्ने भन्दै थप तयारी गरेका छन्। भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा. डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कोरोना सङ्क्रमितको नियमित उपचार हुँदै आएको जानकारी दिँदै हाल २८ शय्या छुट्याइएको बताए। तीमध्ये १० शय्या सघन उपचारकक्ष र १८ शय्या एचडियू रहेका छन्। उनले आवश्यकतानुसार शय्या बढाउँदै लैजाने जानकारी दिए।
अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र तरल अक्सिजन ट्याङ्कसमेत जडान गरिएकाले विगतको जस्तो अक्सिजनको अभाव नहुने उनले विश्वास दिलाए। भरतपुर अस्पतालले दुई दिनअघि कोभिड प्राविधिक समिति नै बनाएर कोभिड सङ्क्रमितको उपचारको थप तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ।
चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रताप देवकोटाले सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि थप तयारी गरिएको बताए। उनले पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमित आउने क्रम बढेको बताउँदै हाल २५ शय्या कोभिडका लागि छुट्याइएको जानकारी दिए। देवकोटाले भने, ‘हामीले आवश्यकतानुसार शय्याको सङ्ख्या बढाउँदै लैजान्छौं।’
कोभिडको दोस्रो लहरसँगै सघन उपचारकक्ष र एचडियूको सङ्ख्या बढाइएको जानकारी दिँदै देवकोटाले सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन, सघन उपचारकक्ष, एचडीयू र बच्चाका लागि बाल सघन उपचारकक्षसमेत पर्याप्त रहेको जानकारी दिए। उनले पिसिआर परीक्षण गर्ने आफ्नै प्रयोगशाला रहेको समेत जानकारी दिए।
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) का आवासीय निर्देशक डा. मनोहर प्रधानले अस्पतालमा विगतदेखि नै कोभिडका लागि छुट्याइएको १२० शय्या अहिले पनि तयारी अवस्थामा राखिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले कोभिड उपचार वार्डमा अरु बिरामी राखेका छैनौं, ती शय्या अहिले पनि अलग्गै राखिएको छ।’ आवश्यकतानुसार शय्या बढाउन सकिने प्रधानको भनाइ छ।
अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेकाले अभाव नहुने उनले बताए। अस्पतालले पछिल्लो समय पिसिआर मेसिन पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगत दुई महिनादेखि पिसिआर मेसिन सञ्चालनमा आएको प्रधानले जानकारी दिए। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपकप्रसाद तिवारीले सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै खोप अभियानलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाइएको बताए। सङ्क्रमण फैलन नदिन आवश्यक जनचेतना जगाउने काम कार्यालयले गरिरहेको छ। हाल चितवनका अस्पतालमा १३ सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये तीनजना सघन उपचारकक्षमा उपचाररत छन्।